News Archives - TheeSayChin
July 23, 2019 Min Yar Zar	0 Comments News
စာဖတ်ပရိသတ်များ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ… ယခုတင်ဆက်ပေးမယ့် ရုပ်သံကတော့ မူးယစ်ဆေးကြောင်နေတဲ့ အဖေဖြစ်သူဟာ ကလေးနှင့်အတူတိုက်ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ကလေးကိုမထိတထိ ကိုင်ထားပြီး လျှောက်သွားနေခဲ့တာကြောင့် ကလေး ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ရုပ်သံပဲဖြစ်ပါတယ်….. အဆိုပါရုပ်သံအရ အဖေဖြစ်သူဟာ..တိုက်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာ အမူးသမားတစ်ယောက်သဖွယ်… ယိုင်တိယိုင်ထိုး လမ်းလျှောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်….. အပြစ်မဲ့ကလေးဟာ အဖေရဲ့
ရည်းစားကို အလုပ်ထုတ်လို့ဆိုပြီး ဆိုင်ရှင်ကို ဓါးနဲ့ ဝင်ခုတ်မှု ဖြစ်ပွား
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်း ပြည်ခရိုင်၊ ရွှေတောင်မြို့နယ် သရက်တောရပ်ကွက်၊ တရားရုံးလမ်းထောင့်နှင့် ရန်ကုန်- ပြည်ကားလမ်းမကြီးဘေးရှိ ကုန်စုံဆိုင်တွင် ယမန်နေ့က နေ့လည် ၁ နာရီခန့်က ဒါးခုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဒါးခုတ်ခံရသူ ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးဇေယျာညွန့်မှ ” ကျနော်နဲ့လည်း မရင်းနှီးဘူး
မနက်ဖြန် ၂၄.၇.၂၀၁၉ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ ရုံးချိန်းအား ဝန်းရံမည့်သူများကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ ဆရာသက္ကမိုးညို…!
မနက်ဖြန် ၂၄.၇.၂၀၁၉ ဟာ သမီးငယ်လေး အမှုအတွက် ရုံးချိန်းပါ။ ရုံးချိန်းမှာ CMP ခေါ်တဲ့ ဘယ်သက်သေကို ဘယ်နေ့မှာ စစ်မယ်၊ ရုံးချိန်း ဘယ်လောက်မှာ ဖြတ်မယ် စတဲ့ တရားရုံး အစီအစဉ်ကို နှစ်ဖက် ညှိနှိုင်း
အရှေ့တောင်အာရှမှာရှိတဲ့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာ Smart City ဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာရှိတဲ့ မြို့အနေနဲ့ မန္တလေးမြို့တော်ကို အခုနှစ်မှာ ထပ်မံရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက ပြောပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အများပြည်သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ တိရစ္ဆာန်တွေ အစာကျွေးရင် အရေးယူတော့မယ် လို့ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ မြို့တော်နယ်နမိတ်အတွင်း အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ သန့်ရှင်းရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို အစာမကျွေးဖို့၊ မလိုက်နာဘူးဆိုရင် စည်ပင်ဥပဒေအရ အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့
အလကားဆေးကုပေးတဲ့အပြင် လက်ဆောင်ဆိုရင် ဘာလက်ဆောင်မှ လက်မခံတဲ့​ အရမ်းလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ သူလိုဆရာ…!
အခမဲ့ဆေးခန်း ဆို တာ ဆေးခန်းရှေ့ မှာ အသင်းကါး တစ်စီး ရပ်ထားတာ တွေ့ လို့ စာဖတ် ကြည့်လိုက် တော့ နယ်က အသင်းကါး မတ္တရာနယ်က ဆေးခန်း လူနာ လာပြတာလား ဆိုတော့
မနေ့ညကကျွန်တော်အလုပ်ကပြန်တော့9:00 pm ထိုးခါနီး ညီမငယ်လေးတစ်ယောက် 78 လမ်း သိပ္ပံလမ်း မီးပွုင့်မှာပန်းလာရောင်းတယ်၊ပထမတော့ကျွန်တော်သတိမထားမိဘူးပန်းလာရောင်းလို့တော်ပြီညီမလေးဆိုပြီးမုန့်ဖိုး၃၀၀ပေးခဲ့တယ်။ မီးကလည်းစိမ်းတော့မယ်ဆိုတော့ကလေးမလေးငိုနေတယ်ဘဲထင်ခဲ့တာသတိမထားမိဘူးမျက်စိကမျက်ရည်တွေကျနေလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သေသေချာချာသိချင်လို့ပြန်လှည့်ပြီးကြည့်ကြည့်တော့- မျက်စိတစ်ဖက်ကကျိန်းနေတာဖွင့်လို့တောင်မရဘူး ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကလေးမလေးမျက်စိကျိန်းနေတာတောင်ခိုင်းရက်တယ် ဆိုပြီး ကလေးမလေးကိုမေးကြည့်တယ်- ညီမလေးဒါဘယ်သူကခိုင်းတာလည်းဒီလိုဖြစ်နေတာတောင်ခိုင်းရက်တယ်လို့မေးကြည့်တော့အမကခိုင်းတာတဲ့ပထမတော့အမအရင်းကခိုင်းတယ်ထင်နေတာ ၊ သေချာအောင်လို့အမရင်းကခိုင်းတာလားဆိုတော့မဟုဘူးတဲ့သူစိမ်းကတဲ့ဒါမျိုးခိုင်းတဲ့သူတွေကိုထိထိရောက်အရေးမယူတော့ဘူးလားဗျာ…သူတို့အရွယ်လေးတွေမှာညအချိန်မတော်ကြီးအဲဒီချိန်ဆိုအိမ်မှာလုံလုံခြုံ ခြုံ နဲ့စာကျက်ရနေရမဲ့အချိန်ဗျာ ဒီလိုခိုင်းတဲ့သူတွေကိုထိထိရောက်အရေးမယူတော့ဘူးလားသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များဒီတိုင်းလေးပဲလက်ပိုက်ကြည့်နေတော့မှာလားကိုယ့်သမီးကိုယ့်တူမလေးတစ်ယောက်လိုသဘောထားခံစားပြီး ဒါမျိုးခိုင်းတဲ့သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖမ်းစီးပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ကနဦးသတင်း – အလွန်​​ခြောက်​ခြားဖွယ် ​​ကောင်းတဲ့ နှိပ်​စက်​မှုပါ
July 22, 2019 Min Yar Zar	0 Comments News
ဒီဖြစ်ရပ်ကို Phoe Zaw အကောင့်ပိုင်ရှင်မှ ၂၁.၇.၂၀၁၉ ည ၁၁ နာရီ ခန့်က တင်လိုက်တဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်မှာဖြစ်ပျက်ထားတယ်ဆိုတာ အတိအကျရေးမထားပေမယ့် အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်လို့သိထားရပါတယ်။ မူရင်တင်သူ Phoe Zaw ရဲ့ သတင်းအပြည့်အစုံကို အောက်မှာ
ယမန်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမြန်လမ်း EXPRESS တိမ်းမှောက်မှုမှာ အသက်ဆုံးသွားသူလေး
ဒီ​နေ့ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်၊ ညနေ ၂နာရီခွဲ အချိန်၊ နေပြည်တော်-ရန်ကုန် အမြန်​လမ်းမကြီး မိုင်တိုင် ၁၆၅/၃ အနီးမှာ ဖြစ်​ပွားခဲ့တဲ့ ထွန်းဧရာ(ပခုက္ကူ-ရန်ကုန်) Express ယာဉ်ရဲ့ အရှိန်လွန်တိမ်းမှောက်​မှု​ကြီး​ကြောင့်​ ခရီးသည်​ ၅၁ ဦးထဲ
ကားနဲ့တိုက်ပြီး သေဆုံးခဲ့သော်လည်း ရုတ်တရက် မက်တက်ရပ် လမ်းလျှောက်ပြီးမှ သေရမည်ကို သတိရပြီး ပြန်လည် လဲကျသွားသည့် ဖြစ်ရပ်ဆန်း
( Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာ တွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ) ချစ်ခင်ရတဲ့ စာရှုသူများခင်ဗျာ.. အခုတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးကတော့ အင်မတန်မှကို ရယ်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းပြီး ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ရုပ်သံဖိုင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်သံဖိုင်လေးထဲမှာတော့.. လူတစ်ယောက်က